Dowlada: Hala musaafuriyo darawalada Ajnabiga ah. - NorSom News
Dowlada: Hala musaafuriyo darawalada Ajnabiga ah.
Sanadihii ugu danbeeyay, waxaa aad usoo badanayay cabashooyinka laga soo gudbinayo darawalada ajaaniibta ah ee gudaha Norway ka howlgala, gaar ahaan kuwa ka shaqeeyaa baabuurta xamuulka ah ee waaweyn.
Waxaana la diiwaangaliyay shilal badan oo ay sabab u ahaayeen darawalo ajaaniib ah oo aan aqoon fiican u laheyn sharciyada wada-marista Norway ama aan u baran ku shaqeynta cimilada qabowga ah ee Norway. Iyada oo marar badan la qabtay darawalo baabuurta ku wado taayarada xagaaga, iyada oo lagu jiro xiliga qaboobaha ee barafka. Sidoo kale waxaa la qabtay darawalo ajaaniib ah oo
Darawalada Norwiijiga ah iyo guud ahaan dadka ka shaqeeyo xirfadaha la xiriira, ayaa dowlada Norway horey marar badan cabasho uga gudbiyay arintan, iyaga oo ka codsaday in wax laga qabto.
Wasiiradda cadaalada Norway Monica Mæland ayaa hada sheegtay in dowladu ay rabto in la musaafuriyo darawalada ajaaniibta ah ee heysta sharciyada kumeel gaarka ah, isla markaana lagu qabto inay jabiyeen xeerarka wado-marista Norway. Ama sababo shilalka halista ah.
Shirkadaha Norwiijiga ah ee ka shaqeeya xamuulka ayaa darawalada ajaaniibta ah ee ka imaada Yurubta bari, ka doorbida kuwa Norwiijiga ah, maadaama qarash ahaan, mushaarkoodu uu aad uga hooseeyo kuwa Norwiijiga ah.
Xigasho/kilde: Vil utvise utenlandske sjåfører
Previous articleBergen: Nin Norwiiji ah oo wiil soomaali ah mindi galiyay.
Next articleOslo: 428 maalin kadib markii uu dhintay, ayaa lafahiisa laga helay qolkii uu kaligiis degenaa.